Dawladda federaalka oo QM ka dalbatay qaadista xayiraadka hubka ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Dawladda federaalka oo QM ka dalbatay qaadista xayiraadka hubka ee Soomaaliya.
Nofeembar 14, 2012 2:33 g 0
Muqdisho, Nov 14 ? Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa Qaramada Midoobay ka codsaday in Soomaaliya si degdeg ah looga qaado cuna-qabataynta hubka ee muddada dheer saanayd, taasoo uu horay ugu soo rogay golaha ammaanka ee midawga ummadaha adduunka.
Hadalkaan, ayaa waxaa jeediyey wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Cabdixakiin Maxamuud Xaaji ?Fiqi? mar uu ka hor hadlayey baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu sheegay haatan in la gaaray xilligii la-laali-lahaa xayiraadda xagga hubka ah ee Soomaaliya saaran.
Mr. Fiqi, ayaa sheegay baahi weyn in loo qabo ogalaanshaha hub dibadda uga yimaada Soomaaliya, maadaama lugaha lagala baxay hannaankii KMG ahaa, isla markaana ciidamada Soomaaliyeed ay halgan ballaaran kula jiraa argagixiso caalami ah iyo mid waddani ah waa sida uu hadalka u dhigaye.
Wasiirku, waxaa uu intaasi ku daray qaadista cuna-qabatayntu in ay muhiimad weyn u leedahay ka mira-dhalinta himilooyinka qoondaysan ee dawladdan, kuna aaddan ka xoraynta dalka Al-shabaab iyo Al-qaacida, taasoo xilligaanna guulo wax-ku-ool ah laga gaaray, loona baahan yahay in lasii laban-laabo.
Waa markii labaad ee dawladda federaalku sannadkaan gudihiisa ay Qaramada Midoobay ka dalbato qaadista xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya, waxaana sidoo kale horay u jirtay soo jeedimo ka yimid Midawga Afrika iyo urur-goboleedka IGAD, taasoo lagu dalbanayey in la qaado xayiraaddaasi hubka.
Caawa iyo Daljir, Nov 14-2012, Axmed Nuur Ibraahim (Somali)_Daljir Boosaasox
Dawladda Kenya oo wali tabataagan mellayshiyaad dilay askar dawladda ka tirsan.